Dhimashada Baydhabo oo korortay - BBC News Somali
Dhimashada Baydhabo oo korortay
29 Febraayo 2016
Image caption Gurmadka caafimaadka ayaa goobta yimid iyadoo dhaawaca uu ka badan yahay 50.
Dhimashada qaraxyadii Baydhabo ee shalay ayaa korortay, iyadoo dhaawaca uu dhaafay konton qof.
Sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo kala duwan oo ay ku jiraan kuwa caafimaadka, tirada dhimashada ayaa hadda kor u dhaafaysa 30 qof kadib markii ay dhinteen dad dhaawacyo culus qabay.
Agaasimaha isbitalka Baydhabo Cabdifataax Ibraahim Xaashi, ayaa sheegay xalay ilaa saaka in ay isbitalka ku dhinteen 7 qof taas oo kordhisay dhimashada ay sababeen qaraxyadii baydhabo ka dhacay.
Image caption Qaraxyada ayaa beegsaday dad daawanaya kubada cagta iyo jid la buuxay
Agaasimuhu waxa kale oo ii sheegay in 16 qof oo dhaawacyo halis ah qabay loo soo qaaday magaalada Muqdisho si loogu daweeyo.
Dhinaca kale duqa magaalada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin, ayaa BBC-da u sheegay in la soo xiray toddobo qof oo lala xiriirinayo qaraxyadii qasaaraha badan keenay, isagoo dhanka kale tilmaamay in ay ogaadeen geerashkii laga soo abaabulay qaraxyadaasi isla markaana ciidamada ammaanku ka hawgaleen.
Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada qaraxyadii lagu qaaday maqaayado ku yaala Baydhabo, iyadoo sababta ay u bartilmaameedsadeena ku sheegay in ay fariisan jireen saraakiil ka tirsan maamulka konfur galbeed Soomaaliya.
Al-Shabaab waxa ay weerar kan oo kale ah ka fuliyeen mid kamid ah maqaayadaha hadda la qarxiyay bishii December sanadkii 2014kii, markaasoo ay dhinteen dad kabadan toban qof kuna dhaawacmeen labataan kale.
Xaaladda magaalada Baydhabo ayaa maanta dagan, inkastoo ay wali ka muuqdaan raadadkii ay uga tageen labadii qarax ee shalay galab dhicii lagu bartilmaameedsaday labo maqaayadood oo ku yaala bartamaha magaalada taasoo khasaaraha ka dhashay uu noqday kii ugu baaxadda weynaa ee Baydhabo soo mara.